Madaxweyne Xaaf oo Dhuusamareeb ku laabtay ka dib safarkiisii Gaalkacyo. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Xaaf oo Dhuusamareeb ku laabtay ka dib safarkiisii Gaalkacyo.
written by Siid Cali 09/04/2020
Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf ayaa dib ugu laabtey Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug,kadib markii habeen ka hor uu safar deg deg ah ku tegay Magaalada Gaalkacyo.
Xaaf oo sheegay in uu u tanaasuley Shacabka Galmudug ayaa maalma ka hor waxaa uu tegay Magaalada dhuusamareeb,isaga oo kulan la qaatey Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor.
”Madaxweynaha ayaa safar degdeg ah habeen hore ku tagay Magaalada Gaalkacyo waxa uuna caawa dib ugu soo laabtay Caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb” auaa lagu yori qoraal ka soo baxay xafiiska Madaxweyne Xaaf.
Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay in safarka deg dega ahaa ee uu ku tegay Magaalada Gaalkacyo uu ahaa mid isaga u gaar ah,hayeeshee uu dib ugu laabtey Dhuusamareeb.
“Dad badan ayaa siyaabo kala duwan u dhigay safarka Madaxweynaha balse waxaanu u cadeyneyna in arimo gaar u ah isaga uu u baxay Madaxweynuhu dibna ugu soo laabtay Caasimada ayaa lagu yiri”Warka kasoo baxey Xaaf.
Maalmaha soo socda ayaa la filaya in Xaflad kooban lagu qabto Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug,isla markaana uu xilka sirasmi ah ugu wareejiyo Madaxweynaha la doortey ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor.
Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimada Maamulka Galmmudug ayaa waxaa ku sugan inta badan xildhibaanada Dowladda Faderaalka Soomaaliya ku mala deegaanada Galmudug waxaana halkaasi lagu xaliyay khilaafkii ka dhashay doorashadii Dowladu garwadaynka ka ehayd oo Dhuusamareeb ka dhacday horaantii sanadkaan 2020.
Madaxweyne Xaaf oo Dhuusamareeb ku laabtay ka dib safarkiisii Gaalkacyo. was last modified: April 9th, 2020 by Siid Cali
Dhageyso: Maxaa keena Af-qurunka?